प्रचण्ड र बाबुरामको आज लिखित डिभोर्स ! – YesKathmandu.com
मङ्गलबार २५, फागुन २०७२
काठमाण्डौ, २५ फागनु । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वउपाध्यक्ष तथा नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईबीच आज लिखित डिभोर्स हुने भएको छ । ३० बर्षे लामो राजनीतिक संगत गरेका प्रचण्ड र बाबुरामको पत्रकार नेत्र पन्थीले आज लिखित डिभोर्स गराउने भएका छन् ।
विहान साढे ११ बजे वानेश्वरस्थित अल्फाबिटा हाउसमा पत्रकार पन्थीले प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको ३० बर्षे राजनीतिक यात्रा र त्यसपछिको सम्बन्ध बिच्छेदलाई लिएर पुस्तक प्रकाशन गर्दैछन् । प्रचण्ड र बाबुरामको ‘डिभोर्स’ नाम दिइएको पुस्तक आज विमोचन हुने भएको छ ।
पत्रकार पन्थी बामपन्थी लेखक हुन् । माओवादी युद्ध र त्यसपछि भएपछि गतिविधिमा गहिरो ज्ञान राख्ने पत्रकार पन्थीले यसअघि पनि केही पुस्तक लेखि सकेका छन् । माओवादीभित्रका यौनकाण्डदेखि बिचारिक चर्चासम्म चियो उनले यसअघि नै गरिसकेका छन् ।
४५ बर्षअघि विपीको एउटा भनाई ‘मैले यो जित शेरबहादुरमा देखेको छु,’
ससुरा अर्जुननरसिंक केसी र ज्वाई गगन थापको भाग्य फैसला आज
भूकम्प पीडितलाई चौतारीको ५० हजार सहयोग
वालुवाटार छाड्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परे चौतर्फी घेराऊमा
ठुलो कांग्रेस विरालो भयो, सानो माओवादी सरकारमा बाघ बन्यो
राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान सागर थापासहित ४ खेलाडी म्याच फिक्सिङको आरोपमा पक्राउ
नयाँ बानेश्वरमा चितुवा आतंक
कांग्रेसका जनजाति सभासद्को छुट्टै भेला
केपी ओलीका भित्रिया मुसा देउवा निवास बुढानीलकण्ठ सरे !
काभ्रेबाट खोल्यो एमालेले विजयको खाता
प्रमुख अतिथिको रुपमा डाकिएका ओली माओवादीको जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रममा नजाने
संविधान संशोधनको पक्षमा राप्रपा(प्रजातान्त्रिक),कमल थापाद्वारा राणासहित ६ जनालाई निस्कासन
१७ केजी सुनसहित एक जनालाई पक्राउ
अन्नपानी र तेल रोकेर फेरि नाकाबन्दी गर्ने धम्की दिने को हुन यी टोपीवाला ?